United Nations Inozeya Nyaya yeZvirwere Zvisingatapuriranwi
Gurukota rezvehutano Dr Henry Madzorera nevamwe vakuru mubazi ravo vatanga kupinda musangano kuUnited Nations uri kutaura pamusoro pekukura kuri kuita dambudziko rezvirwere zvisingatapuriranwi muAfrica.
Zvirwere izvi zvinosanganisira shuga kana kuti diabetes, BP, stroke kana kuti kuoma mitezo, nezvimwe zvakadaro.
Zvirwere izvi zvaisizivikanwa sezvirwere zvevanhu vari kunyika dzakabudirira, asi pari zvino sangano reUnited Nations rinoti zvatekeshera muAfrica zvekuti zviri kuuraya vanhu zvakanyanyisa, izvo zvasvitsa kuti paitwe musangano mukuru uyu wokutsvaga kuti zvoitwa sei kubatsira kuti vanhu vararame.
VaMadzorera vaudza Studio 7 kuti vachange vachidzidza kubva mumusangano uyu zviri kuitwa nedzimwe nyika mukuderedza zvirwere izvi munyika dzavo.
Vatiwo vari kutarisira kutanga chirongwa chinokurudzira vana veZimbabwe kuti vadye zvine hungwaru, kutamura miviri yavo nezvimwe zvakadaro.
Dr Douglas Gwatidzo, vanowe mukuru weZimbabwe Doctors for Human Rights vaudzawo Studio 7 kuti zvinofadza kuti pasi rose riri kutaura pamusoro pezvirwere izvi kuitira kuti veruzhinji vazive kuzvichengetedza.